Nizeria, taloha sy ankehitriny
Efitrano Fanjakana no iantsoana ny trano ianaran’ny Vavolombelon’i Jehovah Baiboly. Ny Fanjakan’Andriamanitra mantsy matetika no resahina any, sady izany no tena notorin’i Jesosy.—Lioka 8:1.
Ao amin’izy ireny no ivavahana amin’i Jehovah. Ao izahay no mahazo toromarika mba hamitanay tsara ny asa fitoriana ataonay. (Matio 24:14) Tsy mitovy ny haben’ny Efitrano Fanjakana sy ny paoziny. Samy tsotsotra daholo anefa izy rehetra ary fiangonana iray, fara fahakeliny, no mivory ao. Efitrano an’aliny (dimy eo ho eo isan’andro) no naorina tato anatin’ny taona vitsivitsy, satria nitombo be ny isan’ny fiangonana. Ahoana no nahavitana izany?—Matio 19:26.
Vola avy amin’ny fanomezana an-tsitrapo no anamboarana azy ireny. Alefa any amin’ny sampana ny vola azo avy amin’ny fanomezana, mba homena an’izay fiangonana mila manorina na manavao efitrano.
Samy hafa fiaviana ny mpanorina azy ireny ary tsy karamaina. Efa manana Ekipa Mpanorina Efitrano Fanjakana izahay any amin’ny tany maro. Misy Vavolombelon’i Jehovah hafa koa anefa miasa an-tsitrapo manampy azy ireo. Mifindrafindra any amin’izay toerana anaovana fanorenana ry zareo, ary tonga hatrany ambanivohitra be mihitsy aza. Manampy ny fiangonana hanorina Efitrano Fanjakana izy ireo. Misy rahalahy efa za-draharaha koa voatendry hanara-maso ny fanorenana sy fanavaozana efitrano any amin’ny tany vitsivitsy. Misy rahalahy efa mahay an’ilay asa koa manampy an-tsitrapo. Ny fiangonana anefa no tena manao ny asa. Ataony amin’ny fo manontolo ilay izy sady manampy ny fanahy masina, ka vita izany rehetra izany.—Salamo 127:1; Kolosianina 3:23.
Nahoana ny trano ivavahana amin’i Jehovah no atao hoe Efitrano Fanjakana?
Ahoana no ahavitana manorina Efitrano Fanjakana eran-tany?
Efa mba nieritreritra ve ianao hoe inona no ataonay rehefa mivory? Tena ho gaga ianao raha tonga any, satria tena mahaliana ny fampianarana ara-baiboly any.